Igumbi lokulala elinomtsalane elinye elikufuphi nolwandle lwaseCandolim - I-Airbnb
Igumbi lokulala elinomtsalane elinye elikufuphi nolwandle lwaseCandolim
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRita
Igumbi lokulala eliyilwe kakuhle elinefenitshala epheleleyo ebekwe entliziyweni yeCandolim. Ikhaya leHolide elilungele isibini ukuba sichithe iholide yaso yothando kufutshane nolwandle lwaseCandolim okanye iqela elincinci laba-4 abangathanda ukwenza itheko kunye nokonwaba eGoa.
Le yenzelwe kakuhle kwaye igcinwe kakuhle igumbi lokulala eli-1 elinegumbi lokuhlala kunye nedama lokuqubha eliqhelekileyo. Inazo zonke izinto ezinje ngamanzi ashushu n abandayo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo igumbi lokulala elitofotofo, igumbi lokuhlambela elicoceke kakhulu. Indawo ephambili yokudibanisa Le ndawo ikufutshane nolwandle (malunga nemizuzu eli-10 ngokuhamba). iindawo zokutyela iikhefi iibhari iivenkile ezinkulu zingaphandle nje. Le yindlu yabucala kwindawo entle eCandolim. I-Calangute kunye ne-baga yimizuzu emi-5 yokukhwela kodwa ngokunyanisekileyo ndingathanda ukuhlala eCandolim njengoko ulwandle lucocekile ngakumbi kwaye aluxinana kwaphela. Okona kubaluleke kakhulu uya kufumana iindawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neekhefi ezidlamkileyo ngakumbi kwaye zidlala umculo omnandi ngokwenene ngexesha lesizini n ezimbalwa kwixesha elingekhoyo kwirediyasi ye-1-2kms. Ndiza kuhlala ndicebisa ezona ndawo zingcono zokutyelela kwaye ndijonge iGoa ngamava am.
Nceda uqaphele ukuba ungene okanye uphume phakathi kwentsimbi ye-10pm - 6am uya kubizwa R300
4.78 out of 5 stars from 226 reviews
4.78 · Izimvo eziyi-226
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi226
Ulwandle oludumileyo lwecandolim , sinQ & LPK night Club zihamba ngemizuzu eyi 05 . Kukho iindawo zekofu ezithandekayo Njenge-chocolatti, iindawo zokutyela ezifana ne-L orange, i-calamari, indlu yamatye, ii-newtons ezidumileyo kunye nevenkile enkulu yaseDelfinhos kufuphi nefulethi. Indawo yokuhlala ibekwe kwi-5 -10 imizuzu yokuhamba ukusuka eCandolim beach
Umbuki zindwendwe ngu- Rita
Ndihlala ngaphakathi nangaphandle eMumbai naseGoa. Ukuba ndiseGoa, ndiya konwaba ngakumbi ukukwamkela ngokwam ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba andikho eGoa, ndihlala ndifumaneka kwifowuni.